Desktop Cryptowatch: Fampiharana hanaraha-maso ny tsena crypto manerantany | Avy amin'ny Linux
Desktop Cryptowatch: Fampiharana hanaraha-maso ny tsena crypto manerantany
Linux PostInstall | | fampiharana, maro
Androany, hiverina indray isika eo amin'ny sehatry ny Mundo DeFi (Fitantanam-bola itsinjaram-pahefana: ekosistia ara-bola misokatra loharano). Ary noho izany antony izany dia hiresaka fampiharana hafa mahaliana sy mahasoa antsoina izahay "Desktop Cryptowatch".
"Desktop Cryptowatch", amin'ny ankapobeny dia sehatr'asan'ny birao an'ny mpamorona iray ihany izy io, antsoina "Cryptowatch". Mba hahafahan'ny mpampiasa azy mankafy eo an-toerana ny tombontsoa azo avy amin'ny fampahalalana momba azy, ary afaka araho ny tsena crypto manerantany avy amin'ny azy ireo Rafitra miasa GNU / Linux ary ny hafa.
Toy ny mahazatra dia hamela ny tenantsika hitadidy sy hanolotra isika fampahalalana mahasoa mifandraika amin'ny lohahevitra, izany hoe, ataovy azo ampiasain'ny antoko liana, rohy amin'ireo lahatsoratra teo aloha mifandraika miaraka amin'ny lohahevitra ankehitriny. Ka raha ilaina dia afaka manitatra ny fahalalany an'ity faritra ity izy ireo:
Markets dia rindrambaiko mpampiasa interface interface izay miasa ho toy ny tracker ho an'ny tahiry, vola ary crypto. Na izany aza, CoinTop dia fampiharana haingana sy maivana ho an'ny mpampiasa terminal (CLI) fifandraisana ho an'ny fikarohana crypto. Markets sy Cointop: fampiharana 2 GUI sy CLI hanaraha-maso ny Cryptocurrencies
BINANCE: Ahoana ny fametrahana ny Binance Desktop App amin'ny Linux?
1 Desktop Cryptowatch: Markety Crypto amin'ny fotoana tena izy
1.1 Inona ny tranonkala Cryptowatch?
1.2 Inona ny fampiharana Cryptowatch Desktop?
1.4 Fampidinana, fametrahana, fampiasana ary pikantsary
1.4.1 marary mitsika
1.4.4 Sarin'ny sary
1.5 Fampahalalana misimisy kokoa
Desktop Cryptowatch: Markety Crypto amin'ny fotoana tena izy
Inona ny tranonkala Cryptowatch?
famantaranandro crypto dia tranonkala malaza be izay manolotra a sary sy serivisy fijanonana terminal ho an'ny tsena cryptocurrency. Mba hanomezana ny mpampiasa azy, a interface matanjaka amin'ny fitiliana ny vidin'ny fananana crypto, manadihady ny hetsiky ny tsena crypto ary mivarotra amin'ny lehibe rehetra tranokala fifanakalozana (Fifanakalozana). famantaranandro crypto fananan'ny Kraken Bag.
Inona ny fampiharana Cryptowatch Desktop?
"Desktop Cryptowatch" Izany dia fampiharana desktop eo amin'ny sehatra hafa novolavolaina hahafahan'ny mpampiasa azy, eo an-toerana avy amin'ny solosain-dry zareo hanangana ny azy tabilao tsena, amin'ny fomba ahafahan'izy ireo miasa amin'ny fotoana tena izy sy araho ny tsena crypto manerantany ny mahaliana anao.
Ho fanampin'izay, tsara ny manamarika izany sy amin'ny tenin'ireo namolavola azy:
"Ireo mpampiasa "Desktop Cryptowatch" Ho tsikaritr'izy ireo fa ny rindrambaiko dia mavitrika kokoa ary mahomby amin'ny loharano raha oharina amin'ireo safidy mifototra amin'ny tranonkala mahazatra ankehitriny. Ny Desktop dia voasoratra amin'ny Rust amin'ny alàlan'ny rafitra GUI entanin'ny Rust. Ny fampiasana ny Rust dia namela ny ekipanay hamorona rindranasa miampita sehatra nohavaozina ho an'ny CPU kely sy ny fanjifana fahatsiarovana, ny tahan'ny haingam-pandeha ary ny fitoniana."
"Cryptowatch Desktop" amin'izao fotoana izao Handeha ho an'ny kinova miorina 0.3.2 izy ary manana ireto toetra manaraka ireto:
Manolotra fanaingoana endrika tsara ho an'ny interface: Izay mamela ny fanaingoana ny rafitry ny tontonana mba hizara ny efijery fampahalalana amin'ny zavatra tena ilaina na ilaina indrindra, toy ny tabilao vidiny, boky famandrihana, fotoana ary loharanom-barotra, ankoatry ny singa hafa.
Izy io dia maivana, haingam-pandeha ary ambany dia ambany: Izay manome fahombiazana tena tsara sy ialana amin'ny fampiasana loharanon-karena IT (RAM, CPU) be loatra, fisorohana ny hafanana be loatra amin'ny fitaovana ampiasaina, sady mampiseho fampahalalana marobe momba ny tsena. Raha atao teny hafa, dia natao hiasa tontolo andro izy nefa tsy terena solosaina.
Izy io dia manana fahaiza-manao tsara mampiavaka ireo takelaka fampahalalana: Raha vantany vao namboarina tamin'ny takelaka fampahalalana notadiavina ny interface dia azo namboarina ihany koa izy ireo hifanaraka amin'ny mpampiasa anao, noho ny lisitr'ireo safidy sy fikirana mitombo.
Ahitana fifandraisana tsara indrindra eto an-tany: Misaotra ny fifanentanana iraisan'ny rehetra amin'ireo ivon-toerana tafiditra ao amin'ny Cryptowatch, amin'ny alàlan'ny fifandraisana latency tokana.
Raha te haka azy io dia tsy maintsy miditra amin'ny fizarana ofisialin'ny «Cryptowatch Desktop» ao anatin'ny tranokalan'i "Cryptowatch". Ao anatin'izany dia atolotra azy ireo izao fonosana installer amin'ny endrika Debian (.deb) y voafintina (.zip).
Amin'ity fotoana ity dia hampiasa ilay endrika izahay Debian (.deb) ary hapetrakay amin'ny mahazatra antsika izany Respin (Snapshot mivantana sy azo ampidirina) anarana voatondro Fahagagana GNU / Linux izay miorina amin'ny MX Linux. Ary efa nohamarinina ho azy Fitrandrahana nomerika amin'ny fananana Crypto, manaraka ny tolo-kevitra marobe, ireo tafiditra ao amin'ny publication dia nantsoina «Avadiho ho lasa Operating System mety ho an'ny Digital Mining ny GNU / Linux anao».
Efa alaina ny fonosana. "deb" (ho an'ny tranga azo ampiharina) afaka mametraka ny kinova ankehitriny 0.3.2 mampiasa ny baiko "Dpkg" o "Apt" toy izao manaraka izao:
Efa napetraka, "Desktop Cryptowatch" azo tanterahina ny Menu ho an'ny fampiharana an'ny azy GNU / Linux ambany, mitady ilay mitovy anarana aminy: "Desktop Cryptowatch". Ary raha te hahalala bebe kokoa momba ny fiasa sy ny mety ananany dia azonao atao ny miditra aminy Torolàlana ho an'ny mpampiasa an-tserasera.
Raha mila fanazavana fanampiny momba an'io fampiharana maimaim-poana, izay sady tsy maimaim-poana no tsy misokatra, fa mety tena ilaina amin'ny mpitia Cryptocurrency izany, azonao atao ny mitsidika ireo rohy 2 manaraka ireto:
Kraken - Desktop Cryptowatch
Blog Cryptowatch - Inona no vaovao ao amin'ny Version 0.3?
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Cryptowatch», mahaliana sy mahasoa Fampiharana Desktop (GUI) noforonina ho an'ireo mpampiasa mazoto ny Tontolo DeFi, manokana ireo izay isan'andro isan'andro mpivarotra (mivarotra izy ireo) samy hafa Cryptocurrencies amin'ny alàlan'ny orinasa ary mila manara-maso ny tsena crypto manerantany amin'ny fotoana tena izy; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Desktop Cryptowatch: Fampiharana hanaraha-maso ny tsena crypto manerantany
Eddy Sandoval dia hoy izy:
Tena tsara aho nampiasa cointop ary avy eo nanova ny rafitra ary tsy nahita an'io intsony tamin'io fotoana io dia tsy nanana mpiorina deba aho, misaotra tamin'ny fandraisana anjara, fiarahabana ary fitahiana.
Mamaly an'i eddy sandoval
Miarahaba anao, Eddy. Misaotra tamin'ny hevitrao. Ary eny, CoinTop dia tsara ary mifameno tsara amin'ny tsena. Fahombiazana sy fitahiana maro ho anao koa.
ABOS-P1: Mikaroka ny loharano misokatra sy midadasika Alibaba - Fizarana 1
Ny cryptocurrency Chia, mampiakatra ny vidin'ny kapila mafy